Apple na-ekere òkè n'oge ha niile dị elu ruo afọ abụọ | Esi m mac
Apple na-ekere òkè n'oge ha niile dị elu n'ime afọ abụọ
Ọnụahịa ngwaahịa Apple agbanweela ihe na-erughị ọnwa 12. Ọ bụ ọkara nke mbụ nke 2015, mgbe mbak Apple nọ na ahịa dị elu, ịbụ ụlọ ọrụ mbụ na ụwa site na isi ahịa.
Companylọ ọrụ ahụ malitere inwe maturing ngwaahịa. Nke ahụ bụ, ọ na-ere ọtụtụ iPads, Macs na n'ezie iPhones, n'etiti ngwaahịa ndị ama ama. Ọ ga - ekwe omume ịre karịa, yana ihe mara mma maka ndị ahịa ịgbanwe ngwaahịa ha ugbu a maka nke ọhụrụ. Mana n’oge ahụ, ọhụụ Apple apụtaghị na oke ya.
Site n'oge ahụ, ahịa malitere ịda ada n'ihi enweghị ngwaahịa ọhụrụ na ngwaahịa ya na ụlọ ọrụ ahụ emeghị ka nsonaazụ nkeji ọnwa ọ nwetara n'otu oge nke afọ gara aga, ya mere, Apple enwetaworị obere. Ma Apple mere ngwa ngwa: ikike ụlọ ọrụ buru ibu na-enyere ya aka ịrụ nnukwu itinye ego na R&D. Tinye ego ka ị ga n'ihuNke a bụ nkà ihe ọmụma Apple maka ọnwa ole na ole gara aga. Akụkọ na mgbanwe nke iPhones, mmepe nke MacBook, yana MacBook Pro na-adịbeghị anya, bụ ihe atụ nke a.
Apple na-ere ahịa taa na 134 XNUMX, ka otu euro dị n'okpuru ya nke dị n'April 28, 2015. Ma ndị na-enyocha ngwaahịa na-egosi na uru ngwaahịa a abaghị uru. Ego a akwụsịbeghị na-eto eto n'ime ọnwa anọ gara aga. Na mbipụta ikpeazụ nke nsonaazụ ikpeazụ nke Jenụwarị, ọnụahịa ahụ mụbara site na $ 7 n'otu ụbọchị.
Ruo taa, Apple bụ otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị baa uru, nwere nnukwu ọnụ ahịa ahịa dị ihe dị ka ijeri XNUMX. Steven milunovich UBS na ndị ọkachamara a ma ama na-ebu amụma na-abawanye na ngwaahịa. Drexel Hamilton gara n'ihu ma tinye uru nke ebum n'uche ya na € 185.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Apple na-ekere òkè n'oge ha niile dị elu n'ime afọ abụọ
Cargbọ ala Juan dijo
«Historical kacha maka afọ 2», enwebeghị m ike ịnọgide na-agụ mgbe m hụrụ ụdị nkwenye ahụ
Hapụ Mac gị na faịlụ dị arọ na nke na-abaghị uru na File Sumo maka ihe na-erughị euro
EXIF App, na-enye anyị ohere inweta data EXIF ​​nke foto anyị